Waxaan sidoo kale u baahan tahay in aad Help
Cool Domains for Sale: - YeuNu.com, stopt.co, solution.sale, Rakee.co, CreditCard.rip, CTRCoin.com, PhPhT.co,
- Tus account Paypal (ama hababka kale ee lacag bixinta) ee Donate page , sidaas oo dhan martida taageero laga yaabaa in aad caawimo.
NOW Nala soo xiriir haddii aad rabto in aad ku caawin
Taageerayaasha naga caawisay
turjumi English - Vietnamese
turjumi English - Faransiiska
English - Jarmal
Hadda waxaan u baahan nahay
RuushChineseJapanKuuriyaanItalianoHollandThaiRomanianMalayHindiIndonesianPolishAlbaaniyaanCarabiArmenianBelarusBosnianBulgarianCroatianDanishIstooniyaanFilipinoFinnishGreekCreole HaitianHawaiianHebrewHungarianIcelandLaoLatinLaksambargishMakedoniyaMongoliyaanNepaliNorwegianIiraaniSerbianSloveniaSoomaaliSuudaaniisSwedishUrduiyo 200+ luqado kale
Currently waxaan kaa caawin karnaa oo kaliya dadka isticmaala Internet leh 6 nooc oo daalacashada: Internet Explorer & Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera iyo Apple Safari.
Waxaan qorsheyneynaa in aan siiyo tilmaamaha lagama maarmaanka u ah daalacashada caanka ah badan: Maxthon, Netscape, iyo ido, Rockmelt, Comodo, iwm, laakiin aynaan haysan qalabka ku filan si ay u tijaabiso iyo qabsadaan Screenshot ah. Fadlan naga caawi, waxaan aad u baahan tahay.
Waxaan qorsheyneynaa. aad Arag ugu dhakhsaha badan la tilmaamo badan oo waxtar leh!